“ပြည်သူသန်းငါးဆယ်ကျော်”… – PVTV Myanmar
အဓမ္မကို ဆရာတင်၊ အာဏာသွေးနထင်ရောက်တော့
ပေမမှီလူ့သူခိုး၊ မှိုင်းမိလူ့သူဝှက်ကို လက်ဟန်ပြ
မိသားစုဝင်မရှိ၊ တရားမျှတမှု မရှိ
စိတ်ဝိဉာဉ်သန်းငါးဆယ်ကျော် အတူရှိ‌ နေသတဲ့
ပြည်သူ့ ရှေ့ နေတွေရဲ့ မှန်ကန်ရိုးသားသစ္စာရှိမှု ကြီးစိုးသတဲ့……
“ကျန်းမာဖို့ ဂရုစိုက်ကြပါ” ၊
အ‌‌ေမ အိုရဲ့ မေတ္တာ စကား၊
အမေအိုက ပြည်သူ့ရှေ့နေတွေကို အကူအညီတောင်းတယ်
“ဆေးဝါးနဲ့ ရိက္ခာစီစဉ်လို့ရရင် စီစဉ်ပေးပါ”
သူစုထားတဲ့ငွေ၊ ဝယ်ထားတဲ့ဆေးဝါး ပို့ပေးချင်ကြောင်း ပြောဆိုသတဲ့…
အမေအို ဆီသွားတွေ့ နိုင်ဖို့
Like – 13K Share – 1822
2021-06-19 at 6:57 PM
2021-06-19 at 7:58 PM
Happy birthday AMay Suu🙏🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹🌹♥️♥️♥️♥️♥️
Daw Thi Thi Lwin says:
အမေ့ မေတ္တာတို့ ကြောင့်…
ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား အားလုံး
နှင့်တကွ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်တော်
၃၁ သား အားလုံးလည်း..
ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်း တို့ ဖြင့်…
ပြည်သူလူထုကြီးရဲ့ အမေ့ အပေါ် ထားရှိတဲ့…
မေတ္တာ တို့ ကြောင့်…
ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်း တို့ နှင့်
စ တဲ့ တပိုး တိုး သည်ထက် တိုး လို့…
နေရာ လပ် မကျန်….
အမေ့…မေတ္တာ တွေ ပျံ့နှံ့နိုင်ပါစေ….
ကမ္ဘာ့ အချမ်းသားဆုံး နိုင်ငံကြီးတွေက
အမေ ပိုင်ဆိုင်တာက မေတ္တာလက်နက်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးမားဆုံးသော လက်နက်က မေတ္တာ လို့
၁၉၈၉ ကထဲက ​ေၾကာက္​ရြ႔ံျခင္​း
မ်က္​စိ နား အလင္​းခြန္​အား ​ေပး
သနား​ေတာ္​မူ​ေသာ သံမဏိ ႏွင္​း
ဆီဟာ ဒီက​ေန႔ထိ ​ေပးဆပ္​​ေနရ
တုန္​းပါ သူမအ​ေနနဲ့အ​ေန သာျကီးပါ
ရင္​း စ​ေတး​ေနရ တာလည္​း
အဲ့တာ အ​ေဖ့​ေသြး အာဇာနည္​
​ေသြး ျပည္​သူကုိ မ်က္​လုံး ျပဴး
​ေစ ဦး​ေနာက္​ႀကီး​ေစ နားကား
သူ ့နာမည္​ တဦးတည္​း ဘာ​ေၾကာင္​့မ်ားလည္​း ၿပီးျပည္​့စုံၿပီး
သားဘဝကုိ ျပာပုံတုိး အနာခံ
သူကုိခ်စ္​ လက္​​ေတြ ့
​အ႐ွင္​ေဂါတမ​ေတာင္​ သူမ​ေလာက္​ ႏွိပ္​
ဆက္​မခံရ အႀကိမ္​၂ ​ေထာင္​သြင္​းအက်ဥ္​းခ်မခံရ သူမခ်စ္​ရ​ေသာ
ျပည္​သူအတြက္​ ခ်စ္​သူ မုန္​းသူ
ျဖန္​ ့​ေဝႏူိင္​တာ ႐ုပ္​နမ္​ တထပ္​ထဲ
​ေဂါတမ ​ေယ႐ူ လပ္​ခ်မီး ကြာရင္​
အလာ တုိ ့ရဲ ့​ေနာက္​က ကပ္​ လုိက္​​ေန​ေသာ ဒီ သူမဟာ ဒီက​ေန ့ထိကုိ ဇရာျဖစ္​​ေန​ေပမဲ့
မ်က္​လုံးနဲ ့ဒူး ကမာ​ေၾကာတုံး
မုိး​ေပါ ္က က်လာတဲ့ ဂ်ဳိသား
တ​ေန႔တခ်ိန္​​ေတာ့ အ​ေဖလုိ ​ေက်ာက္​႐ုပ္​အျဖစ္​ ထုဆစ္​ခံရ
မဲ့ အာဂ မိန္​းမမ်ဳိးႏြယ္​ သံမဏိ
မီးအိမ္​႐ွင္​ ဆုိတာ ဘာတဲ့တုန္​း
Yin Yin Hlaing says:
2021-06-21 at 3:42 AM
2021-06-21 at 9:26 AM
နားထောင်မိတိုင်း ကြားမိတိုင်းတွေးမိတိုင်း စိတ်ထဲကဝမ်းနည်း မျက်လုံးကမျက်ရည်ဝဲရပါတယ် နိုင်ငံ့မိခင်အမေအိုကြီး ကျန်းမာပြီး မတရားထိန်းသိမ်းခံရချင်းမှထာဝရလွတ်မြောက်ပါစေ
ငြိမ်းချမ်း အောင် says:
2021-06-21 at 11:11 AM
U Sein Thaung says:
2021-06-21 at 1:41 PM
2021-06-21 at 2:37 PM